Football Khabar » रियलबाट ‘लखेटिन लागेका’ बेलको नयाँ उडान चीनतर्फ !
रियलबाट ‘लखेटिन लागेका’ बेलको नयाँ उडान चीनतर्फ !
स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडले बेच्ने तयारी गरेका वेल्स स्टार ग्यारेथ बेल चिनियाँ क्लब जाने सम्भावना बढेको छ । उनलाई सुपर लिग क्लब ज्याङ्सुले अनुबन्ध गर्ने चर्चा सरुवा बजारमा चुलीमा छ ।
वेल्सको राष्ट्रिय टोलीका कीर्तिमानी गोलकर्ता खेलाडीले रियल छाड्नुपरे चीनलाई नयाँ गन्तव्य बनाउने बुझिएको छ । बेल निकट स्रोतका अनुसार बेलले चिनियाँ क्लबसँग ३ वर्षका लागि सम्झौता गर्ने तयारी गरेका छन् ।
तर, स्पेनिस अधिकारीले भने यसको आधिकारिक पुष्टि गरिसकेका छैनन् । रियलका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले बेललाई नयाँ सिजनमा आफ्नो टोलीमा नराख्ने प्रष्ट भएपछि बेललाई भित्र्याउन थुप्रै क्लबले चासो दिइरहेका छन् ।
जिदानसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो बन्न नसकेपछि स्पेनमा बेलको भविष्य संकटमा परेको छ । मिडिया रिपोर्टअनुसार बेललाई चिनियाँ क्लबले कीर्तिमानी प्रतिसाता १ मिलियन पाउन्ड कमाउनेछन्, जुन विश्व फुटबलकै सबैधिक ठूलो कमाइ हुनेछ ।
हाल ३० वर्ष पुगेका बेल सन् २०१३ मा इंग्लिस क्लब टोटनहृयामबाट त्यसबेलाको कीर्तिमानी ८५ मिलियन पाउन्डमा रियलमा अनुबन्ध भएका थिए । रियलसँग बेलको अझै तीन वर्षको सम्झौता बाँकी नै छ ।
प्रकाशित मिति ११ श्रावण २०७६, शनिबार १४:२३
सेभिल्ला भर्सेस बार्सिलोना : पहिलो हाफमा सेभिल्ला १–० ले अघि